शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्याराेपण केन्द्र आफैं विरामी ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्याराेपण केन्द्र आफैं विरामी !
काठमाडौँ, २९ फागुन, शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्याराेपण केन्द्र धेरै मिर्गाैला प्रत्याराेपण हुने केन्द्र मध्ये एक हाे । यस केन्द्रमा दैनिक एक सय बढीकाे डायलासिस र हप्तामा ८ जनाकाे मिर्गाैला प्रत्याराेपण हुन्छ । तर सीमित क्षमता र शैय्या अभावका कारण यस केन्द्रले नयाँ बिरामी लिन सकेकाे छैन । मिर्गाैलाकाे डायलासिसका लागि चार सय बिरामी पालाेकाे पर्खाईमा छन् । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ”हामीसँग सीमित क्षमता र शैय्या अभावका कारण नयाँ बिरामी लिन निकै अप्ठ्याराे छ ।”
नेपालमा वर्षेनी ३ हजार जनाकाे मिर्गाैला फेल हुन्छ । करीब ३० लाख मानिस मिर्गाैलासम्बन्धी कुनै न कुनै राेगबाट प्रभावित रहेकाे अनाैपचारिक तथ्याङ्क समेत छ । तीन सय शैय्याकाे आवश्यकता भएपनि याे केन्द्र हाल सय शैय्यामा सन्चालित छ । ”हामीलाई तीन सय शैय्याकाे आवश्यकता छ तर सय बेडमा अस्पताल चल्नुपर्छ । त्यसैले धेरै बिरामी उपचारका लागि पालाेकाे पर्खाईमा छन् ।”, डा. श्रेष्ठले भने ।
(सन्दर्भ: विश्व मिर्गाैला दिवस)
पाँच वर्षमा यस केन्द्रले ५ सय ७६ जनाकाे मिर्गाैला प्रत्याराेपण गरिसकेकाे छ । यस केन्द्रमा वार्षिक ३० हजार सेसन डायलासिस हुन्छ भने २ सय जनाकाे मिर्गाैला प्रत्याराेपण हुन्छ । उपचारका लागि आउने अधिकांश बिरामी राजधानी बाहिरका छन् । त्यसैले याे केन्द्र प्रादेशिक तहमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने उनकाे भनाई छ ।
भन्छन्, ”याे केन्द्र यहाँ भएर मात्र हुँदैन । किनभने यहाँ उपचारका लागि आउने अधिकांश बिरामी राजधानी बाहिरका छन् । त्यसैले याे केन्द्र सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न सके । उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ ।” मुलुककाे एक मात्र सरकारी प्रत्याराेपण केन्द्र भएकाले पनि यसकाे क्षमता विस्तार गर्नु आवश्यक छ । किनभने नेपालमा वर्षेनी मिर्गाैला राेगीकाे संख्या बढ्दाे छ ।
Tagged प्रत्यारोपण केन्द्र मृगौला
उपकुलपति डा. रौनियारलाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिश
सर्वपक्षीय सहमतिपछि ६ महिनादेखिको खोला अवरोध हट्यो
ट्रायल दिने नक्कली ब्यक्ति पक्राउ
Tags: प्रत्यारोपण केन्द्र, मृगौला